Wasiirka arrimaha gudah oo la eedeeyey lana qorsheeyey in looga yeero baarlamanka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 4 November 2014
Mareeg.com: Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa ku eedeeyey wasiirka arrimaha gudaha C/llaahi Goodax Barre inuu ku fashilmay howlihii wasaaraddiisa laga sugayey.
Xildhibaan Jeesow oo Gudiga Arrimaha Gudaha iyo Amniga ee baarlamaanka Soomaaliya oo shalay ka hor hadlayey kulanka xildhibaanada ayaa ku eedeeyey wasiir Goodax inuu wax ka qaban waayey colaadaha ka jira Hiiraan iyo Shabellaha Hoose.
Xildhibaan Jeesow ayaa sidoo kale ku eedeeye wasiirkaas inuu gobolada iyo degmooyinka qaar ka dhisay maamulo aan dadku isku raacin.
Sidoo kale, wuxuu Jeesow sheegay in wasiir Goodax uu gargaar gaarsiin waayey deegaanada dhibaatooyinku ka jiraa, wuxuuna yiri “Wuxuu gargaar gaarsiin waayey Jowhar, Buurhakabo iyo Qoryooley, mana arkin meel uu kaalmo geeyey”.
Ugu dambeyntii, xildhibaan Jeesow ayaa tilmaamay Gudiga Arrimaha Gudaha iyo Amniga Baarlamaankau 12 bishaan isku raaceen in wasiirka looga byeero Golaha Shacabka.
Bishii April ee isla sanadkan 2014 ayuu wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka C/llaahi Goodax Barre wuxuu hortgeya baarlamaanka, isagoo ka jawaabay su’aalo la weydiiyey, waana markii labaad ee looga yeero baarlamaanka hortiisa.